Madheshvani : The voice of Madhesh - सरकारले बजेटमा विभेद गर्यो सरकारले बजेटमा विभेद गर्यो : शेख जमशैद
सरकारले बजेटमा विभेद गर्यो सरकारले बजेटमा विभेद गर्यो : शेख जमशैद
वडाअध्यक्ष गौर नगरपालिका, वडा नं. ६
विधार्थी जीवनदेखि नै मधेशी जनताको हकहितको संघर्षमा लागि आफ्नो राजनीतिक जीवनको आधी समय खर्चेर अहिले पनि मधेशवादी दलमा रहेर राजनीति गर्दै आएका गौर नगरपालिका वडा नम्बर ६ का वडाअध्यक्ष एवं गौर नगरपालिकाका प्रवक्ता शेख जमशैद विद्यालयमा पढ्दै गर्दा स्वर्गीय गजेन्द्र नारायण सिंह नेतृत्वको नेपाल सदभावना पार्टीका भातृ संगठन विद्यार्थी मंचको ५ वर्ष जिल्ला अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्भालेका थिए । विद्यार्थी संगठनबाट पार्टीको कोषाध्यक्ष, जिल्ला सचिव हुँदै लामो समयसम्म पार्टीको जिल्ला अध्यक्ष भएर काम गर्दै मधेशमा चलेको लामो आन्दोलनमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको नेतृत्व समेत गरीसकेका र अहिले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका संयोजक रहेका निर्वाचित वडाअध्यक्ष शेख जमशैदसँग गौर नगरपालिका र वडाको विकास सम्बन्धी गरिएको कुराकानीः
० आफ्नो वडाका जनताका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?
— वडामा पिछडिएका समुदाय मुस्लिमको बसोबास सबैभन्दा बढिरहेको छ । हिन्दू समुदायको बसोवास पनि रहेकोले दुवै समुदायको विकासका लागि कार्य गर्दै अघि बढिरहेको छु । चालु आर्थिक वर्षको ४० लाख बजेट सीमा रहेकोले सोही अनुसार विकास निर्माणको योजना तयार गरेको छु । हिन्दूहरूका लागि ब्रह्मस्थानको मर्मत, कम्पाउण्ड निर्माण, मुस्लिमहरूको कब्रिस्तानलाई मर्मत, कम्पाउण्ड वाल, पुरानो बाटोको मर्मत, नयाँ बाटो निर्माण, छात्राहरूलाई साइकल वितरण, स्वास्थ्यमा ४० हजार, शहरी स्वास्थ्य केन्द्रका लागि शौचालय निर्माण, बाथरूम निर्माणका लागि ८ लाख बजेट छुट्याइएको छ । हिन्दू, मुस्लिमको शिक्षाका लागि विशेष प्राथमिकता रहेको छ । जनचाहना अनुसार कार्य गरिरहेको छु ।
० वडालाइ कस्तो बनाउने सोच्नु भएको छ ?
— वडालाई एउटा नमूना वडाको रूपमा बनाउने सोच लिएका छौं । वड़ामा बाटो घाटोंको राम्रो व्यवस्था, विद्यालयको स्तर सुधार, स्वास्थ्यको सुधार गरी औद्योगिक स्थापना गराउने लक्ष्य रहेको छ । पानी निकास, सिंचाइको सुविधा, विद्युतको आपूर्ति, बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने योजना रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा बढी लगानी सामाजिक विकास, आर्थिक उन्नति, सिप विकास, उद्योगको स्थापनामा गर्नेछु । पाँच वर्षमा पूरा गरेर नमूना वडाको रूपमा परिचित गराउने छु ।
० विकासको कार्य गर्दा के कस्ता समस्या आउँछ ?
— विकासको कार्य गर्दा राजनीतिक रूपमा समस्याहरू आउने गर्छन् । आफू नगर्ने र अरूले गर्दा विवाद, बाधा, अवरोध पु¥याउने मानसिकता बोकेका व्यक्तिको कारण कठिनाईको सामना गरिरहनु परेको छ ।
० तपाई नगरपालिकाको प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ अहिले नगरपालिकाको कार्य कस्तो छ ?
— रौतहटमा सबैभन्दा पुरानो नगरपालिकाको रूपमा गौर नगरपालिका रहेको छ । नयाँ संरचनाअनुसार जिल्लामा १८ स्थानीय तह रहेको छ । जसमध्ये अहिलेसम्म ५ स्थानीय तहले दोस्रो नगरसभा गर्न सकेको छैन । गौर नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा ४० प्रतिशत बजेट खर्च गरिसकेको अवस्था रहेको छ । गौर नगरपालिका जनचाहनाअनुसार विभिन्न क्षेत्रमा विकासको यात्रा शुरू गरेको छ । नगरपालिकाको कार्यले नगरवासी सन्तुष्ट छन् ।
० संघीय सरकारले दिएको बजेट पर्याप्त हो कि अपुग हो ?
— संघीय सरकारले हामीसँग विभेद गरी बजेटमा पनि कमी गरेको छ । अधिकारमा कटौती गर्दै आएका संघीय सरकारले बजेटमा एकरूपता कायम गर्न सकेको छैन । सदरमुकाममा अवस्थित रहेको नगरपालिकामा अपुग बजेटले कार्य गर्न कठिनाई भैरहेकोले आगामी आर्थिक वर्षमा जनसँख्या तथा भौगोलिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै बजेट उपलब्ध गराउन म संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्दछु ।
० वडावासीलाई के प्रतिबद्धता दिन चाहनुहुन्छ ?
— म यस पत्रिका मार्फत नगरवासीलाइ के सन्देश दिन चाहनु छु भने गौर नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर, वडाअध्यक्ष लगायत सवै कर्मचारीहरू नगरको विकासका लागि प्रतिवद्ध छन् । सवैको सहकार्य, सहयोग विना विकासको कार्य सम्भव नरहेकोले विकासको कार्यमा काँधमा काँध मिलाएर अघि बढ्नु पर्छ । जनचाहनाअनुसार हामी कार्य गर्छौं भने सहयोगी हातहरू अघि आउनु जरूरी छ । पुरानो नगरपालिका रहेकोले जिल्लाभरि चाप यसै नगरपालिका माथि रहेको छ । बजेट कमी रहेकोले व्यवस्थापन गर्न समस्या रहेको छ । सडकको निर्माण हुँदा जग्गा उपलब्ध गराई दिन हार्दिक अपील गर्दछु । विकासको कार्यमा पारदर्शिता हुनुपर्ने मेरो मान्यता रहेको तथा लेखाजोखा जाँचबुझ निगरानी गर्नु जनताको लोकतान्त्रिक अधिकार रहेकोले सजग र सक्रियता देखाउनु पर्छ । विकास अवरोध हुने गरी कार्य नगर्न जनतासँग आग्रह गर्न चाहन्छु । शिक्षा, स्वास्थ्यको विकासलाई प्राथमिकतामा लिएर बढिरहेकोले यस अभियानमा सवैले हाथ बढाउनु प¥यो । बेटी बचाऊ, बेटी पढाउ अभियानमा सहयोग गर्नुपर्छ । नगरपालिकाले गौरमा रहेको वित्तीय संस्थाको साथसाथै सर्वसाधारण जनताको सुरक्षाको निमित्त ३० लाखको लगतमा अपराध नियन्त्रण गर्नका लागि सीसी कैमरा जडान गरेर उदाहरणीय कार्य समेत गरेको छ । बनेको बाटोलाई सुरक्षित गर्नु सबैको कर्तव्य रहेको छ । घर आँगन जस्तो बाटो घाटोलाई सफासुग्घर राख्न अनुरोध गर्दछु । पुरानो नगरपालिकाको रूपमा रहेको गौर नगरपालिकालाई पूर्ण बजेट र विशेष प्याकेज उपलब्ध गराउन संघीय सरकार तथा प्रादेशिक सरकारसँग माग गर्दछौं । — प्रस्तुति : राकेश यादव